Budada Pregabalin si loo daweeyo suuxdinta iyo walwalka | Budada AASraw
/blog/Pregabalin/Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Pregabalin
Posted on 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 ku qoray Pregabalin.
1.Waa maxay Pregabalin?
Pregabalin (148553-50-8) waa daawo inta badan lagu iibiyo magaca astaanta ah ee Lyrica gobolada kala duwan ee aduunka. Waa daawo ka hortagga suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan 'anticonvulsant'. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo dareenka maskaxda ee keena suuxdinta. Dhinaca kale, Pregabalin wuxuu saameeyaa kiimikada maskaxda ee u soo dirta calaamadaha xanuunka guud ahaan nidaamka neerfaha jirka. Daawada waxaa sidoo kale loo adeegsadaa adduunka caafimaadka si loogu daaweeyo xanuuno kala duwan oo ay sababaan cuduro kala duwan sida xanuunka dareemayaasha oo ay keeneen fibromyalgia, sonkorowga, iyo xitaa xanuunka laf-dhabarka.
Pregabalin waxaa ku jira kaabsal-ka-sii-deyn, sii-deyn ballaaran, ama kiniinno shaqeynaya muddo dheer iyo sidoo kale xalka afka (dareeraha). Dhamaan foomamka Pregabalin si isku mid ah ayey u shaqeeyaan, dhakhtarkaaguna wuxuu noqon doonaa qofka ugu fiican ee dooran kara midka kugu habboon adiga oo ku xidhan xaaladaada ama waxa aad rabto inaad ku gaadho dhamaadka wareegga qiyaasta daawada. Ahaanshaha daroogo afka ah ayaa u adeegta dawada xanuunka ugu fiican bukaano badan oo aan isku waafaqi karin duritaanka joogtada ah. Daawadu sidoo kale waxay u horseedi kartaa qaar ka mid ah waxyeelooyinka daran marka si xad dhaaf ah loo isticmaalo ama si khaldan loo isticmaalo. Hubso inaad had iyo jeer raacdo tilmaamaha qaadashada si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Pregabalin (148553-50-8) waxaa loo wada isticmaali karaa dawooyinka kale si looga caawiyo daaweynta suuxdinta bilawga ah ee carruurta jirta ugu yaraan afar sano jir iyo dadka waaweynba. Sannado badan hadda, daroogadu waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa dunida caafimaadka, taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah daroogada yareysa xanuunka yareysa ee suuqa ku jirta. Daawada waa in la qaataa oo keliya daawada dhakhtar si loo helo natiijooyin wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer hubi inaad ka hesho Pregabalin iibiyaha lagu kalsoon yahay ama soo saaraha hareerahaaga.
2.Qaabka waxqabadka Pregabalin
Pregabalin waxay ka tirsan tahay daawooyinka daawada xinjirowga lidka ku ah. Caadi ahaan, daawooyinka ku jira fasalkani si isku mid ah ayey u shaqeeyaan waxaana loo isticmaalaa daaweynta xaaladaha la midka ah. Ilaa iyo hadda ma cada sida saxda ah ee ay u shaqeyso Pregabalin, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay ka shaqeyso xasilinta dareemayaasha jirka ee dhaawaca u horseedda suuxdin ama xanuun. Daawadu waxay yareyneysaa xanuunnada ku dhaca jirka ee ay sababaan sababo kala duwan ama cuduro. Kala hadal dhakhtarkaaga wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Pregabalin.
Wadanka Mareeykanka Pregabalin ayaa loo oggolaaday in lagu isticmaalo daaweynta cudurrada sida;
Xanuunka dambe ee 'herpetic neuralgia' ama xanuun kaa yimaadaa finanka
Xanuunka sonkorowga sonkorowga iyo
Fibromyalgia waa xaalad caafimaad oo ku lug leh xanuun baahsan, sida muruqyada, unugyada isku xirnaanta, ama jawaabta oo sii kordheysa oo xanuun badan taabashada. Meelaha kale ee adduunka, sida Yurub, Pregabalin waxaa loo isticmaalaa daaweynta ciladda walaaca, waa xaalad daawooyin kale loo isticmaalo in lagu daaweeyo Mareykanka ee Mareykanka. Sida hore loo sheegay, Pregabalin ayaa sidoo kale loo isticmaalaa dawooyin kale si kor loogu qaado natiijooyinka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale dawada u qori kara bukaanka qaba xaalado kala duwan oo lagu dawayn karo ama ay xakamayn karto Pregabalin.
4.Qiyaasta daawada Pregabalin
Qiyaasta daawada Pregabalin waxay kuxirantahay xaalada daweynta. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta ugu hooseysa waa 25mg, halka ugu badnaanna waa 600mg maalin kasta. Dhakhtarkaaga ayaa kuu sameyn doona qiyaasta saxda ah ka dib markuu baarto xaaladaada. Mararka qaar daawada ayaa kugula talin doonta inaad ku bilowdo qadar qaadasho yar, oo waqtiga lagu habeyn karo. Xaaladaha qaarkood, dhakhtarkaagu wuxuu kordhin karaa qiyaasta daawada. The Qiyaasta daawada Pregabalin waa sida soo socota;
Qiyaasta daawada Sonkorowga ee Dadka Waaweyni
Si dhakhsi ah u siidaynta, qiyaasta bilowga ah waa 50mgs oo ay tahay in la qaato seddex jeer maalintii. Qiyaasta waxaa ku kordhin kara dhaqtarkaaga ilaa "100mg" in la qaato seddex jeer maalintii gudaheeda usbuuca koowaad, kaas oo lagu go'aamin doono sida jirkaagu uga jawaabayo qiyaasta koowaad. Baadhitaanka caafimaadku waa muhiim si loola socdo horumarka daaweynta. Markan, qiyaasta Pregabalin waxaa lagu fidin karaa ugu badnaan 300mg maalin kasta, laakiin taasi waa in lagu sameeyaa waqti. Dadka bilowga ah waxaa had iyo jeer lagula talinayaa inay ku bilaabaan qadar qaadasho yar si loo yareeyo waxyeelada.
Sii-daynta sii-dayntu waxay kaaga baahan doontaa inaad qaadatid qiyaasta ugu horreysa ee qiyaasta xaddiga afka ee 150mg hal jeer maalintii, waxaana lagugula talinayaa inaad qaadato kadib cuntada fiidkii. Dhakhtarkaagu wuxuu kordhin karaa qiyaasta daawada ilaa ugu badnaan 330mg maalin kasta. Kordhinta qaadashada waxay dhici kartaa oo keliya ka dib marka dhakhtarku baarayo horumarkaaga iyo dulqaadka jirkaaga ee Pregabalin. Xusuusnow, ha hagaajin Pregabalin (148553-50-8) qiyaasta daawo la'aan haddii takhtarkaagu kugu hagayo. Waxay u horseedi kartaa waxyeelo daran.
Maalinta aad beddelayso qiyaasta qaadashada qiyaasta subaxa caadiga ah sida daawadaagu kuu qoray ka dib bilow qiyaasta cusub ka dib cuntadaada fiidkii. Daraasadaha caafimaad ayaa shaaca ka qaaday in qaadashada qiyaasta sare ee ilaa 600mg maalin kasta aysan keenin wax faa iidooyin dheeraad ah. Markaa, waa inaad ku dhejiso qiyaasta lagula taliyay. Qaadashada ugu badnaan ee 300 illaa 330gm maalin kasta sidoo kale laguma talinayo tan iyo markii ay u horseedi karto saameynta ku-xirnaanta tallaalka.
Qiyaasta dawada dadka waaweyn postherpetic Neuralgia
Halkan daawo qaadashadu waxay u qaybsan tahay laba qaybood, isla markiiba la sii daayo, iyo sii-deyn ballaadhan, oo labadooduba waxay ku kala duwan yihiin qiyaasta qaadashada. Tusaale ahaan, si dhakhso ah loo sii daayo, qiyaasta ugu horreysa ee loo yaqaan 'Pregabalin dose' waa 150mg illaa 300mg maalin kasta, oo loo qaybiyay laba ama saddex daawo rijeeto maalintii. Sidoo kale, qiyaasta waxaa loo kordhin karaa 300 maalin kadib maalmo yar kadib waxay kuxirantahay sida jirkaagu uga jawaabayo qiyaasta bilowga ah. Haddii natiijooyinku yihiin kuwo cajiib ah, markaa takhtarku ma laha sabab uu ku kordhiyo. Daawada ayaa waliba hoos u dhigi karta qiyaasta daawada haddii aad qaadato qiyaasta hooseysa oo aad la kulanto waxyeelooyin daran.
Ka dib qaadashada qiyaasta 300mg qiyaastii laba ilaa afar toddobaad, iyo xanuun joojintu kuma filna, dhakhtarku wuxuu go'aansan karaa inuu ku kiciyo ilaa 600mgs maalin kasta in la qaato laba ama saddex jeer maalintii. Xusuusnow, 600mg maalin kasta waa qiyaasta ugu sarreysa ee lagula taliyo bukaannada oo dhan. Ka-gudbidda heerkan waxay u horseedi kartaa waxyeellooyin daran Pregabalin, taasoo noqon doonta wax adag ama qaali ah in dib loo noqdo.
Halkan, qiyaasta bilowga ah ee 'Pregabalin' waa 165mg oo ay tahay in la qaato hal mar maalintii, waxaana lagugula talinayaa inaad qaadato ka dib cuntada fiidkii. Waxa kale oo suurtogal ah in qiyaasta loo kordhiyo 330mg usbuuca ugu horeeya ee wareegga qiyaasta. Ka dib laba ama toddobaadyo daawo ah oo aan wax horumar ah oo weyn laga helin xanuunka markaa dhakhtarkaaga ayaa kor u qaadi kara qiyaasta ugu badnaan taas oo ah 660mgs maalintii. Markaad beddeleyso qiyaasaha, u qaado subaxda mid si dhakhso ah loo sii daayo ka dibna bilaw daawada sii-fidinta ka dib markaad qaadato cuntadaada fiidkii.
Qiyaasta daawada qallalka ee dadka waaweyn
Daaweynta suuxdinta, qiyaasta bilowga ah ee afka waa 150mg maalin kasta, oo loo qaybiyaa laba ama saddex jeer. Sida dawooyinka kale ee dawaynta ah, dhakhtarku wuxuu ku kordhin karaa xaddiga xNUMXmgs maalin kasta waana in sidoo kale loo qaybiyaa in lagu qaato laba ama saddex jeer maalintii. Halkan qiyaasta ugu badan waa 600mg maalin kasta.
Hufnaanta iyo saamaynta daroogadan waxay dhammaantood ku tiirsan yihiin qiyaasta daawada. Daraasad la sameeyay ma cadeyn muhiimada ay leedahay iskudhafka Pregabalin iyo gabaptiin. Si kastaba ha noqotee, dhakhtarkaagu wuxuu kaala talin doonaa wax badan oo ku saabsan dawooyinka aad u adeegsan doontid dawadan.
Qiyaasta dadka waaweyn ee Fibromyalgia
Halkan qiyaasta bilowga ah waa 75mg oo la qaato laba jeer maalintii waxaana lagu hagaajin karaa 150mg laba jeer maalintii usbuuca ugu horeeya ee qiyaasta daawada. Qiyaasta ayaa sidoo kale lagu kordhin karaa 225mg si loo qaato laba jeer maalintii. Qiyaasta ugu badan ee fibromyalgia waa 450mgs iyo qiyaasta dayactirka ee ku saabsan 300mg ilaa 450mg. Dhinaca kale, daraasaduhu waxay muujinayaan in qaadashada 600mgs maalintii aysan bixinayn wax faa'iidooyin dheeri ah oo Pregabalin ah laakiin ay ka dhalan karto waxyeelo daran.
Pregabalin xanuunka Neuropathic
Qiyaasta bilowga ahi waa 75mg maalin kasta waana lagu kordhin karaa ilaa 150mg maalin kasta. Xaaladda, ka dib qiyaasta laba ama saddex toddobaad, ma jiro wax horumar ah oo la taaban karo, ka dib daawadaadu waxay ku hagaajin kartaa ilaa sare ilaa 300mgs. Qiyaasta xaddiga Dayactirka ee lagu taliyey waxay u dhexaysaa 150 illaa 600mg qiyaaso kala duwan maalintii.
Hagaha Ultimate ee Dihydroboldenone / DHB ee Jidh-dhiska
Adduunyada caafimaadka, way cadahay in Pregabalin ay u keento natiijo tayo iyo tayo leh dadka isticmaala ee raaca tilmaamaha qiyaasta daawada. Tan iyo markii ugu horreysay ee la ansixiyay daroogada 2004, malaayiin bukaanno ah ayaa ka faa'iideystay Pregabalin gaar ahaan maaraynta xannuunka dareemayaasha ee ka dhasha cudurro kala duwan sida Epilepsy, Post-herpetic neuralgia ama xannuunyo dhaca ka dib shingles, xanuunka sonkorowga xanuunka neuropathy iyo Fibromyalgia. Iyada oo ku xidhan sida jidhkaagu ula falgalo Pregabalin, waxaad filan kartaa inaad ku raaxaysato natiijada muddo aad u yar gudahood.
Maalmaha ugu horreeya ee qiyaasta waxay dhakhtarkaaga siinaysaa fursad uu ku qiimeeyo horumarkaaga ka hor intaadan go'aan ka gaarin bal inaad qiyaasta hoos u dhigto ama ka sarreyso. Daraasaduhu waxay muujinayaan inaad kafilayso natiijooyinka maalmaha ugu horeeya ee qiyaasta daawada. Pregabalin waa daroogo dhaqso ku shaqeysa, oo waa inaad, sidaas darteed, filaysaa in xanuunnada lagu nafinayo maalmaha hore ee qiyaasta daawada. Haddii ay dhacdo inaadan la kulmin wax horumar ah usbuuca ugu horreeya ee aad qaadatid qiyaastaada, u sheeg dhakhtarkaaga inuu hagaajiyo qiyaasta natiijooyinka wanaagsan. Jirka bini'aadamku wuu ka duwan yahay, oo ma aha wax otomaatig ah inaad natiijada ku hesho sida ugu dhakhsaha badan kuwa kale. Sidoo kale waxay kuxirantahay xaalada aad daawo kujirto, natiijooyinka way kala duwanaan doonaan. Qaar ka mid ah kuwa caadiga ah Natiijooyinka pregabalin waxaa ka mid ah;
Waxay yareysaa xanuunka dareemeyaasha
Pregabalin waa daw la taaban karo marka laga hadlayo yareynta xanuunnada ka dhasha dhaawaca dareemayaasha sida cudurka dilaaga maskaxda ku dhaca, chemotherapy-pain xanuunka neuropathic, ama Fibromyalgia. Daraasado kala duwan ayaa muujinaya in Pregabalin ay tahay daawada ugu waxtarka badan yareynta xanuunnada neerfayaasha. Kordhinta waxay sii ahaaneysaa mid wax ku ool ah markii kali la isticmaalo ama xitaa marka lagu daro kaabisyada kale ee caafimaad.
Waxay kobcisaa nolol tayo leh oo loogu talagalay bukaanka qaba cudurka loo yaqaan 'Fibromyalgia'
Sidii aan horayba u soo sheegnay, Fibromyalgia waa xaalad aad ku xanuunayso xanuun baahsan. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah tayada hurdada oo liidata, daal, walaac, niyad jab, isku-jir, iyo murqaha oo adkaada. Dawadu waxay ka caawisaa bukaanka inay xakameeyaan waxyeeladaan oo dhan.
Waxay yareyneysaa astaamaha suuxdinta
FDA waxay ogolaatay Pregabalin (148553-50-8) daaweynta cudurka suuxdinta. Daawadan waxaa lagula talinayaa bukaanka qaba suuxdin qayb ahaan dhaawaca maskaxda. Waxaa sidoo kale loo istcimaalaa daaweyn isku dhafan oo loogu talagalay dadka in daawooyinka kale ee lidka suuxdinta ah ay shaqeyn waayaan.
In kasta oo gudaha Mareykanka, Pregabalin looma isticmaalin inuu hoos u dhigo heerarka welwelka, Yurub dhexdeeda, daroogada ayaa caddeysay inuu yahay xalka ugu fiican. Pregabalin ayaa la sheegay in loo adeegsan karo astaan-ka-caawin si loo daweeyo cudurka murugada ee qaybaha kala duwan ee adduunka. Waxa kale oo jira xaalado aan la diwaangelin ah oo dhakhtarku u arko inay lama huraan tahay inuu u qoro pregabalin oo uu wali keeno natiijooyin tayo leh. Daraasadaha caafimaad ee muddada-gaaban iyo muddada-dheerba waxay muujinayaan in dawadan ay si wax ku ool ah u daaweyn karto walwal dhexdhexaad ah iyo walaac daran oo ka dhex dhaca shakhsiyaadka si aad u weyn.
Sirta ku jirta tayada Pregabalin natiijadeedu waa in dhakhtarkaaga laga qayb geliyo dhammaan qiyaasta daawada. Ha isku hagaajin qiyaasta Pregabalin adigoon u sheegin daawadaada. Inta aad si fudud uga iibsan karto dawada dukaamada kala duwan ee internetka, ha bilaabin qaadashada adigoon aadin baaritaan caafimaad. Daroogadani waxay awood u yeelatay yareynta xanuunnada ay sababaan sababo kala duwan. Ciyaartoyda qaarkood waxay sidoo kale isticmaalaan Pregabalin si ay u xakameeyaan murqaha, iyo xanuunka lafdhabarta, kuwaas oo caan ku ah jimicsi xoog leh iyo tartamo.
Kani waa dawo dhakhso u shaqeysa oo firfircoon Pregabalin badh-nolosha ee saacadaha 6. Sidaa darteed, si loo helo natiijooyinka wanaagsan ee Pregabalin, qiyaasta daawada waa in loo qaybiyaa laba ama saddex maalintii. Ahaanshaha daroogo afka ah, ayay kuu fududeyneysaa inaad natiijooyin hesho maxaa yeelay waxay leedahay cimri gaaban oo looga takhalusay nus-nolosha. Had iyo jeer xasuuso inaad ku dhejiso tilmaamaha qiyaasta daawada ee uu dhaqtarkaagu ku siiyo. Xitaa haddii aad qaadatid qiyaasta ugu hooseysa ama ugu sareysa, nolosha nuskeed ee daroogada ayaa wali isku mid ah.
Sida daawooyinka kale ee suuqa yaala maanta, Pregabalin waxay sidoo kale kuu soo bandhigi kartaa waxyeelo daran haddii aad ka badiso. Inta badan Waxyeelooyinka pregabalin Waxay u sabab yihiin si xun u isticmaalka ama mararka qaarkood marka nidaamka jirkaagu si xun ula falgalo daawada. Taasi waa sababta ay had iyo jeer kugula talineyso in lagu bilaabo qaddar yar, oo markaa lagu hagaajin karo daawadaada kadib la socoshada sida jirkaagu uga jawaabayo daawada. Qaar ka mid ah waxyeelooyinka ugu caansan Pregabalin waxaa ka mid ah;
Dawakh - Mararka qaarkood waxaad la kulmi kartaa hurdo yaraan inta aad qaadaneyso dawadan, laakiin waa inay baaba'aan waqti ka dib.
Matag, afka qallalan, iyo madax xanuun ayaa sidoo kale ah waxyeelooyin kale oo baahsan oo laga yaabo inaad la kulanto markaad qaadaneyso dawadan.
Qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaasha Pregabalin ayaa sidoo kale ka cawda cunno qaadashada oo kordhay, taas oo iyana, horseedaysa korodhka miisaanka.
Waxa kale oo jira kiisas la'aanta isuduwidda muruqyada, dhibaatooyinka hadalka, iyo isku-dheelitirka jirka.
Dhibaatooyinkaas oo dhan ee Pregabalin ayaa waqti lumiya waqti ka dib, laakiin haddii ay sii dheeraadaan intii la filayay, waa inaad u sheegtaa takhtarkaaga inuu kaa caawiyo sidii aad u heli lahayd xalka ka hor inta xaaladdu ka sii darin. Dhanka kale, waxaa jira waxyeellooyin daran oo aad la xiriirto daawadaada isla markaaba aad bilowdid inaad la kulanto, waxaana ka mid ah;
Dhibaatooyinka aragga, daqiiqada aad bilowdo inaad la kulanto laba indho, ama aragga indhaha ama wixii isbeddel ah ee araggaaga ah ha ka waaban, isla markiiba wac takhtarkaaga.
Bararka wejiga, bushimaha afka, indhaha, cunaha, carabka, qoorta, ama xaaladaha madaxa waa in isla markiiba la soo sheegaa.
Waxyeelooyinka kale ee daran waxaa ka mid ah; nabarro, cuncun, finanka cagaha, lugaha hoose, gacmaha, iyo gacmaha ama xanuun laabta ah.
Warka wanaagsani waa in dhammaan dhibaatooyinkaas Pregabalin la xakameyn karo haddii aad ogeysiiso dhakhtarkaaga in kasta oo xaaladaha qaarkood ay baaba'i doonaan wakhti markii aad la kulanto saameynta sare ee kor ku xusan ha sii wadin qaadashada qiyaasta adigoon u sheegin daawadaada. Dhakhtarkaagu wuxuu go'aansan karaa inuu joojiyo qiyaasta haddii xaaladdu tahay mid aan la xakamayn karin ama kuu soo jeedin doonta daaweyn kale oo adiga kuu habboon.
Kani waa dawo cadeeyay inuu ka mid yahay dawooyinka suuxdinta ugu suuxsan ee suuqa maanta. Waxaa loo adeegsaday yareynta xanuunka neuropathic adduunka oo dhan, iyo gobollada qaarkood sida Yurub, waxaa loo oggolaaday daaweynta walaaca. Waxaa jira faa iidooyin badan oo aad ku raaxeysan doonto markaad qaadaneyso dawadan, Faa'iidooyinka pregabalin kuwaas oo kala ah;
Waxay soo bandhigtaa natiijooyin tayo leh
Daraasadaha caafimaad waxay cadeeyeen in Pregabalin ay siiso natiijooyin tayo leh dhamaan adeegsadayaasha raacaya tilmaamaha qiyaasta daawada. Kuwa u isticmaalaya xanuunnada neuropathic, waxaad la kulmi kartaa horumar xitaa markaad qaadatid cabirkaaga koowaad. Toddobaadka ugu horreeya gudahiisa, waa inaad bilowdaa inaad la kulanto natiijooyinka oo dhan, taasna waxay dhakhaatiirta siinaysaa fursad ay ku qiimeeyaan nidaamka dawada. Si kasta oo ay ahaato sababta loo isticmaalayo Pregabalin, natiijooyinka markasta waa kuwo cajiib ah.
Dawada afka laga qaato
Pregabalin waxaa afka laga marsiiyaa afka, sidaa darteedna, ma jiraan duriinno ku lug leh. Sidaa darteed, waxay u adeegtaa daawada ugufiican ee adeegsadayaasha aan ku qanacsaneyn duritaanka caadiga ah. Ma aha inaad ka walwaleyso wax xanuun ah, waxaadna si fudud ugu raaci kartaa dawadan dawooyin kale ilaa aad la socodsiiso dhaqtarkaaga.
Waxay leedahay nolosha badhkeed
Marka la barbardhigo dawooyinka kale ee afka laga qaato, Pregabalin waxay ku nooshahay nolol firfircoon muddo dheer jirkaaga, taasoo kuu xaqiijinaysa natiijooyin joogto ah iyo tayo. Waxay kuxirantahay xaalada aad dawadaas ku daaweynaysid, waxaad ubaahnaan doontaa oo kaliya inaad qaadatid qaddarkaaga qiyaastii labo illaa saddex jeer maalintii iyo marmar hal mar maalintii fiidkii cuntada.
Si fudud loo heli karo
Si fudud ayaad u fududeyn kartaa iibso budada Pregabalin inta badan ama ku filan wareeggaaga qaadashada dukaamada kala duwan ee internetka ama farmasiga kuugu dhow maadaama ay sharci ka tahay meelo badan oo adduunka ah. Dhakhtarkaaga ayaa waliba noqon doona qofka saxda ah ee ku tusi doona meesha laga gato. Tani waxay kuu fududaynaysaa inaad iibsato oo aad isticmaasho dawada adigoon jirin wax cabsi ah oo ka soo horjeedda sharciga.
Waxyeellooyin aan yarayn oo aad u yar
Pregabalin wuxuu kuu soo bandhigayaa waxyeelo aan yareyn oo daran oo aad u yar marka la barbar dhigo daawooyinka kale ee loo yaqaan 'anticonvulsants'. Waxaad la kulmi doontaa oo keliya waxyeelooyinka caadiga ah sida madax xanuun, matag, iyo kuwa kale maalmaha ugu horreeya ee qaadashada qaadashada, wayna baabi'i doonaan. Dhanka kale, haddii aad dhaqtarkaaga ugu sheegto waqti ku filan, saameynta horumarsan si fudud ayaa loo xakamayn karaa. Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho waayo-aragnimo ka sii fiican, hubso inaadan isticmaalin ama sameyn wax isku-habeyn ah qiyaasta adigoon u sheegin takhtarkaaga.
9.Pregabalin dib u eegis ah
Markaad eegto dib u eegista kala duwan ee Pregabalin, way cadahay in dad badan oo isticmaala ay ku qanacsan yihiin natiijooyinka ay helaan ka dib markay qaataan daroogada. Pregabalin waxaa si joogto ah loogu isticmaalaa daroogada yareynta xanuunka, waxayna ka heshay jawaab celin wanaagsan inta badan dadka isticmaala. Baarayaasha caafimaadka ayaa sidoo kale soo gudbiyay natiijooyin kala duwan, waana sababta ay FDA u ogolaatay in loo isticmaalo daaweynta Qallalka, Neuralgia Post-herpetic ama xanuunada dhaca kadib shingles, xanuunka Diabetic neuropathy iyo Fibromyalgia.
Qaybaha kale ee adduunka sida Yurub, Pregabalin waxaa loo oggolaaday daaweynta walaaca ka dhex jira dadka waaweyn. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kiisas yar oo la soo sheegay oo isticmaalayaasha qaar ay khibrada ugu xun ka qaateen daroogada. Daroogooyinka si ka duwan ayey ula falgalaan jirka bini aadamka, mana ahan wax toos ah inay kuu shaqeyso kaliya sababtoo ah waxay caawisay saaxiibkaa. Xaaladaha kale ee waxyeelada daran waxaa loo aaneynayaa xad-dhaafka iyo si xun u isticmaalka Pregabalin.
Marka la soo koobo, kani waa dawo weyn marka si sax ah loo isticmaalo iyo sababaha saxda ah. Waxay caawisay malaayiin dad ah oo qaba cudurro kaladuwan, sida kor lagu soo sheegay. Sida dawooyinka kale ee dawooyinka loo qoro, waa inaadan qaadan Pregabalin ilaa takhtarkaagu kuu soo jeediyo mooyee. Haddii ay dhacdo inaad la kulanto waxyeelooyin sidoo kale isla markaaba u sheeg dhaqtarkaaga si ay kaaga caawiyaan inaad ka adkaato
10.Pregabalin iib ah
Adduunku waa isbedelayaa, maantana, waad awood kartaa iibso Pregabalin khadka tooska ah ee shabakadeena qiimo jaban. Websaydhadeenu waa adeegsi-saaxiibtinimo, taas oo kuu sahlaysa inaad ka wareejiso hal shey oo kale iyo sidoo kale inaad amarkaaga ku sameyso ilbiriqsiyo gudahood. Waxaad ka heli kartaa degelkeenna adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah, kiniiniga, ama xitaa laptop-kaaga. Intaas waxaa dheer, waxaan gaarsiineynaa adduunka oo dhan iyo waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Waad ka iibsan kartaa Pregabalin tiro badan ama xitaa ku filan wareeggaaga qiyaastaada.
Waxaan nahay hormuudka alaab-qeybiyaha Pregabalin ee gobolka, iyo qiimaheena la awoodikaro ma jabinayaan tayada wax soo saarkena. Waxaan ku bixinnaa badeecooyin caafimaad oo kala duwan oo tayo leh dukaankeenna internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer kula talineynaa dhammaan macaamiisheenna inay hubiyaan inay maraan baaritaan caafimaad ka hor inta aysan bilaabin qaadashada alaabteenna. Alaabtayada caafimaad waxay u horseedi karaan waxyeelo marka si khaldan loo isticmaalo ama loo isticmaalo si xad dhaaf ah. Pregabalin iib ah Waxaa sidoo kale laga heli karaa farmasiga kuugu dhaw laakiin hubi inaad ka hesho iibiyaha la isku halleyn karo. Maaha dhammaan dukaamada internetka ama dukaamada jir dhiska ay bixiyaan badeecado tayo leh.
11.Pregabalin si loo daweeyo xanuunka Neerfaha iyo Welwelka
Sanado badan hadda, Pregabalin waxay muhiim u ahayd adduunka caafimaadka sidaa darteed daaweynta xanuunka dareemayaasha, oo caan ku ah xanuunka neerfayaasha. Daawada waxay ku shaqeysaa iyada oo la xakameynayo kiimikada maskaxda ee u dirta calaamadaha dareemayaashaada, taas oo iyaduna yareynaysa heerka xanuunka ee jirkaaga. Wadanka Mareeykanka ee FDA wuxuu ogolaaday Pregabalin daaweynta xanuunka dareemayaasha ee ay sababaan cuduro kaladuwan sida Epilepsy, Fibromyalgia, Post-herpetic neuralgia ama xanuuno dhaca kadib xiiqda iyo xanuunka xanuunka macaanka.
Si kastaba ha noqotee, Pregabalin (148553-50-8) looma ogolaanin daaweynta walwalka Mareykanka, in kasta oo ay jiraan warbixino sheegaya in qaar ka mid ah dadka isticmaala ay u isticmaalaan calaamadda si ay u xakameeyaan xaaladda. Qaybaha kale ee adduunka sida Yurub, Pregabalin ayaa laga aqbalay daaweynta walaaca dadka waaweyn. Waxaa sidoo kale jira warbixino aan la xaqiijin oo sheegaya in Pregabalin loo isticmaali karo xakameynta niyadjabka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Pregabalin, la xiriir dhakhtarkaaga ama la tasho farmashiistahaaga.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Astaamaha daaweynta iyo isticmaalka daawada ee bukaanjiifka fibromyalgia ee dhawaan loo qoray amitriptyline, duloxetine, gabapentin, ama pregabalin. Daryeelka arthritis & cilmi baarista, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin iyo pregabalin ee xanuunka-waa la kordhiyay iyadoo loo qorayo sabab walaac leh?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Wax ku oolnimada Pregabalin ee xanuunka degdegga ah ee qalliinka ka dib qaybaha qalliinka kala duwan: falanqaynta moodada. Medicine, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin loogu talagalay daaweynta xanuunka guud ee walwalka: cusbooneysiin. Cudurka maskaxda iyo daaweynta, 9, 883.
Haweenku ma qaadan karaan Primobolan (Methenolone Acetate)?
Primobolan waa steroidska ugu badan ee loo isticmaalo jaridda wareegyada steroidka
Primo (Methenolone Acetate) mid ka mid ah steroid anabolic oo loogu talagalay dumarka
Sidee ayuu Orlistat u shaqeeyaa sidii Daroogada Miisaanka Maansada?	“Isha Isha Dhalinyarada”: NAD + & NMN oo ah Kaabis